Wakiilka qoyska qajaarka bocorka ayaa leh taariikh dheer dheer. Waxay bilaabeen inay koraan 6000 oo sano ka hor. Homeland ee khudraddaas, taas oo ah cilmi ahaan miro, waxaa loo tixgeliyaa inay noqoto India. Laakiin, inkastoo tani, aagga beerashada iyo dhiig-miirashada sifaha this waa mid aad u ballaaran. Xitaa wakhtiyadii hore, dadka ka yimid Afrika, Giriigga, Boqortooyada Roomaanku waxay isu soo baxeen khudraddan, kuwaas oo magacoodu ka yimid Giriigga hore ee "aguros", taas oo macnaheedu yahay "xayiraad iyo ciriiri."
Momordica: Isticmaalida, sifooyinka daaweynta iyo ka hortagga
Momordica, ama sidoo kale waxa lagu magacaabaa rummaan Hindi ah, caleemo qadhaadh ah, qulqulid ama qajaar khabiir ah, qoob-ka-qabad shinni, waa geed canab ah oo ka mid ah qoyska bocdka. Waddanka geedkaan waa India iyo Shiinaha. Waxaa jira noocyo hal iyo dhowr ah oo dhir ah. Guud ahaan, waxaa jira ku dhawaad ​​20 nooc oo momordica ah.
Sida loo takhaluso cayayaanka on qajaarka
Sannad kasta, beeralayda iyo beeraleydu waxay ka cabanayaan cayayaanka qajaarka, kuwaas oo labadoodaba hoos u dhigaya badbaadada miraha iyo burburin wadar ahaan. Badanaa, xayawaanku wuxuu maamulaa inuu waxyeelo ku soo gaarto inta aan la ogaanin, dabadeedna wuxuu bilaabi doonaa inuu jabiyo. Waa lagama-maarmaan in la falceliyo waqtigii hababka kala duwan ee cayayaanka, boogaha iyo dirxiga, taas oo aan macquul aheyn inaad si xun u burburin karto dalagga ama ku faafiso dhirta cudurada.
Sida loo helo dalagyo wanaagsan oo qajaarka ah, beerashada iyadoo la isticmaalayo hidroponics
Qajaar la wadaago - geedo sanadle ah oo ka tirsan qoyska Pumpkin. Dhaqanka ayaa lagu arkay 6,000 oo sano ka hor, Hindiya waxaa loo tixgeliyaa meesha ay ku dhalatay. Dhirta khudradeed ee casriga ah, waxaa jira dhowr siyaabood oo ay u kobcaan qajaarka: kuuluska, foostooyinka, filimka hoostiisa, boorsooyinka iyo bacaha, iyo isticmaalka hidroponics, taas oo hadda aad u caan ah.
Cucumber-liin: qalaad ee beerta
Noocyo badan oo qajaarka ah ayaa la soo saaray, taas oo ka duwan marka loo eego bisaylka, qaabka, cabirka, midabka, dhalidda, iska caabinta cayayaanka iyo cudurrada. Meelaha banaanbaxa iyo jardiinooyinka khudradda badanaa waxay koraan qajaarka qajaarka, cylindrical. Si kastaba ha ahaatee, yar yihiin ogaadaan in ay jiraan noocyo qalaad oo qajaarka, miraha kaas oo noqon karaa labada wareeg iyo ovate.
Sida loo ilaaliyo qajaarka laga bilaabo aphids, hababka wax ka qabashada cayayaanka beerta
Dhab ahaan, aphid ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah cayayaanka ugu waxyeellada badan leh. Qaar badan oo ka mid ah noocyada kala duwan ayaa laga heli karaa beerta furan iyo sirqoollada beerta. Gaar ahaan aphids sida qajaarka dhirta iyo qaraha. Badanaa waxaa jira aphid on qajaarka ee lagu koriyo, inkasta oo tallaabooyinka ilaalinta. Si aad uga takhalusto cayayaanka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo burburiyo aphids iyada oo aan waxyeello u geysan dhirta.
Ma waxaan u baahanahay inaan wax ka qabato ubaxyo madhan oo qajaarka ah
Horumarka qajaarka waxaa ka mid ah bixinta dhaqanka khudradda ee kuleylka, iftiinka iyo qoyaanka. Laakiin sida ay wax u dhibeyso waa marka aan la goosan. Waxaa jira ubaxyo badan oo haramaha ku jira, laakiin waxay u soo baxaan inay madhacaan. Oo waxay dhacdaa sababtoo ah wax soo saarka tayada liidata iyo qaladaadka tiknoolojiyada beeraha. Aynu isku dayno inaan ogaano waxa la samaynayo haddii ay jiraan wax badan oo ubaxyo ah oo qajaarka ku jira, waxaanan si faahfaahsan u falanqeyn doonaa sababaha muuqaalkooda.
Xulashada ugu wanaagsan ee abuurka qajaar ee beerashada dalka
Dhammaanteen waxaanu caadeysnaa sida khudradda fudud oo la awoodi karo sida qajaar. Qajaarka waa marti joogta ah miiska miiskayaga sanadka oo dhan: cusub xagaaga, xilliga qaboobaha ee foomka of pickles. Oo marar dhif ah la kulmaan sida gardarrada, kuwaas oo beerta ka heli doonaa khudradda this. Waxay u egtahay, maxaa ka dhigi kara qajaar? Laakiin sidoo kale way ka duwan yihiin: qaabka, cabirka, midabka, ugu dambeyn, dhadhan.
Qajaaradu waxay noqdeen mid ka mid ah khudradda ugu muhiimsan ee ku jirta cuntada maalinlaha ah ee muwaadiniinteena. Iyaga oo ay la socdaan barandhada iyo yaanyada, waxay ku koraan beerta khudradda cagaaran. Maqaalka ayaa ka wada hadli doona Finger, sharaxaadda qajaarka noocyo kala duwan, sifooyinka daryeelka xanaanada iyo beeritaanka. Tilmaamo kala duwan Tani waxay kala duwan tahay noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'Breedov V.